Saika ny lahatsoratra rehetra dia miaraka amina fehezan-tànana eo an-tampony izay azo ampidirina amina hazo, vy tsy metaly, vy, fantsom-baravarankely. Azontsika atao ny misafidy ny style bracket eo an-tampon-tanana avy any ambony ambony na manerantany hanapahana hevitra raha mipetraka eo ambonin'ilay paositra ny tananao na avo kokoa eo amboniny.
mampiasa Handrail Glass Railing Handrail marevaka sy maoderina handrafetana ny fomba fijerinao am-pahamendrehana, Namboarina tamin'ny fitaovana avo lenta ihany, ny lalantsara hazo sy metaly anay dia manolotra tsipika madio sy fanelingelenana kely. Ny fononteny, ny tonon-taolana ary ny fitaovana fametahana dia noforonina tsara mba hitazomana ny hatsaran-tarehy manodidina anao fa tsy ny fitaovana.
Amin'ny lafiny fitaovana, sarotra ny mahita zavatra tsara kokoa noho ny paositra vy tsy misy fangarony. Izany dia satria ny tsato-kazo vy dia mitazona tombony efatra lehibe tsy zakan'ny fitaovana hafa. Iray amin'ireo tombony ireo ny faharetana, satria ireo poste vy tsy misy fangarony ireo dia ho afaka hihoatra lavitra noho ny andrasan'ny indostria.
Ny fampiasana tsatoka vy dia manome izany faharetana izany na dia tsy mavesatra loatra aza, izay mahatonga azy io ho an'ny faritra toy ny fametahana toerana hametrahan'ny andry vy mavesatra be azy io. Ny toetran'ny vy maivana dia nahatonga azy io ho endrika mahazatra amin'ny tetikasa fananganana maro.
Antony iray hafa mahatonga ny vy ho fitaovana malaza satria manana ireo tombony ireo izy nefa tsy lafo loatra. Midika izany fa azonao atao ny manana fefy vy tsy misy fangarony raha tsy manahy be loatra momba ny famarotana azy ireo ianao. Ny tombony hafa amin'ny paositra vy dia ny fahitana azy tsara; ny fefy vy matevina dia hanome famaranana matihanina ary iray izay haharitra mandritra ny taona maro.
Ny vy vita amin'ny vy dia hanome anao tombony maro izay tsy ananan'ny fitaovana hafa. Miaraka amin'ny vy tsy misy fangarony, tsy mila miahiahy momba ny lo ianao, ary ho kely dia kely ny fikojakojana. Ny vy vita amin'ny vy tsy misy vy dia safidy tsara ho an'ny fencing izay toa tsara ary hijanona ho tsara mandritra ny fotoana maharitra.
Ny vidin'ny rafitra fitaratra tsy misy fantsom-baravarankely dia ho faritana amin'ny halavan'ny lalamby ilainao, ary koa ny safidy farany safidinao.
Aorian'ny fankatoavana ny sarin'ny fivarotana, ny rafitra lalamby fitaratra fitaratra dia mandeha amin'ny famokarana ao amin'ny orinasa any Foshan, Sina. Izahay dia manana fitaovana fanamboarana hazo, vy ary fitaratra ka afaka manamboatra ny sakan'ny tohatra sy ny arofaninao rehetra izahay.
Ny ifantohan'ny fizotrantsika dia ny fanaovana ny fizotry ny fametrahana ho tsotra araka izay azo atao. Ny faritra fitaratra sy vy dia tapaka amin'ny halavany ilainao. Afaka nanao izany marimarina kokoa isika satria mifehy ny fizotran'ny injeniera ho an'ny rafitra iray manontolo, ary mahatonga ny fizotran'ny fametrahana ho asa tsotra.
Teo aloha: Fandroana fitaratra filomanosana fitondra milomano fitaratra
Manaraka: Rafitra fanamoriana vy vy vy ho an'ny lavarangana